ဗဟုသုတ | Page3| Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
By maungmaung 2771 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသာ နေထိုင်သော မြို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ တကယ် ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မြို့ တော်ဝန်ခန့်၊ ကိုယ်တိုင် တစ်ယောက်တည်း အုပ်စိုးနေတဲ့ မြို့ ငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook ပေါ်မှာ လူမျိုးပေါင်းစုံ
၁၊။ Rooster (ကြက်) - Good morning/ မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်း လေးပါလို့ Status တင်ရန် တာဝန်ယူထားသူများ
၂။ Lurker (ဘီလူးငှက်) - သင့် Post ကို Like မလုပ်၊ ကွန်းမင့်မပေး သော်လည်း Credit ပေး၍ ပြန်ပြန်တင်ပေးတတ်သူ
၃။ Hyena (ဟိုင်းအီးနား) - ဘာဆိုဘာမှမပြော. ဟားဟား၊ Lol, Lmao. တို့သာ Comment ပေးတတ်သူ
ယင်းကဲ့သို့ ကြိုးစားမှုနဲ့အတူ ယနေ့တိုင် ထိုက်တန်တဲ့ အောင်မြင်မှုကိုလည်း ရရှိခဲ့စေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အောင်မြင်မှု နောက်ကွယ်မှာ ဝမ်းနည်းစရာ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ် ရှိနေပါတယ်။ ပထမဆုံး အော်ရီဂျင်နယ် လိုဂို လုပ်တုန်းက ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၁၆ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၂၄ ခုနှစ်၊ ၁၉၂၄ ကနေ ၁၉၂၈ ခုနှစ်အထိ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ခြေင်္သေ့ Slats ဟာ သူ့ ခြေင်္သေ့ထိန်း တစ်ဦးနဲ့ လက်ထောက် နှစ်ဦးကို ကိုက်သတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပုံမှာမြင်တွေ့ရတာကတော့ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Suite Vollard ကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းတိုက်ဟာ ၁၁ ထပ်ရှိပြီး တစ်ထပ်စီ တစ်ထပ်စီဟာ ၃၆၀ ဒီဂရီ လည်ပတ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုလည်ပတ်နိုင်အောင် စက်ခန်းတစ်ခုမှ ထိမ်းချုပ်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်အပြည့် လည်ဖို့အတွက် တစ်နာရီ တိတိ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ကို ဖန်သုံးမျိုးနဲ့ အသုံးပြု အလှဆင် ထားပြီး လည်နေတဲ့အခါမှာ အင်မတန်လှပတဲ့ effect တွေပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ် မတ်လက ကင်ညာနိုင်ငံကို မိသားစုနဲ့ အပျော်ခရီးသွားပါတယ်။ သားသမီး ၂ ယောက်၊ ဇနီးနဲ့အတူ Private လေယာဉ်စီးလို့ မြို့ တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ခရီးသွားပါတယ်။ လိုက်ပါမောင်းနှင်တဲ့ လေယာဉ်မှူးဟာ ရောဂါ တစ်ခုကြောင့် ခေါင်းမူးလဲကျပြီး လေယာဉ်တစ်စီးလို့ ပျက်ကျတော့မယ့် အခြေအနေတ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
By aungaung 2773 days ago on ဗဟုသုတ from www.maukkha.org
ဟင်္သာတမြို့ အမိန့်တော်ရရှေ့နေဦးတူသည် လူများကို သနားလေ့ရှိသည်။ မိမိအောက် ငယ်သားများ ကို ငါ့ညီ၊ ငါ့တူ၊ ငါ့နှမ၊ ငါ့မြေးဟူ၍ခေါ်ကာ ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ မိမိထက်ကြီးသူတို့ကို အစ်ကို၊ အစ်မ၊ ဦးလေး၊ ဦးရီး၊ အရီး၊ ထွေးတော်၊ ဘုရားဒကာ၊ ကျောင်းဒကာဟူ၍ ခေါ်ကာ ပြောလေ့ရှိ၏။ မိမိနှင့် တန်းတူများကို ကိုရင်ဟူ၍ခေါ်ကာ ပြောလေ့ရှိ၏။ နာမည်ကို ထုတ်ဖော်၍ခေါ်ငင်ခြင်းကို အလျဉ်းမပြု ဖြစ်ပေသည်။ မိမိအိမ်သူဇနီးကိုလည်း နာမည်ကိုမခေါ် ရှင်မလို့ခေါ်လေ့ရှိသည်။
ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးသည် သူ့အတွက် အကြံပေးနှင့် လူယုံတော်တစ်ဦးကို အလိုရှိသဖြင့် တိုင်းပြည်အတွင်း မောင်းကြေးလှည့်ခတ်ကာ ကြေညာခဲ့သည်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် နန်းတော်တွင်းမှ အမှုတော်ထမ်းတစ်ဦးကို ဘုရင်ကြီးက ခေါ်တွေ့သည်။ ထိုမင်းမှုထမ်းသည် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်ရုံမျှမက၊ နက္ခတ်ပညာကိုလည်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ သူက ဘုရင်ကြီးကို အရိုအသေပေးပြီး သူတည်ဆောက်ခဲ့သည့် အဆောက်အအုံများ၊ တံတားများအကြောင်းပြောကာ ဘုရင်ကြီး၏ ကံဇာတာကိုပါ နက္ခတ်နှင့်ယှဉ်ပြီး ဟောပြောလိုက်သေးသည်။ ထို့နောက် သူသာ ဘုရင့်လူယုံ အဖြစ် အမှုတော်ထမ်းရလျှင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပြလိုက်မည်ဆိုခြင်းကိုပါ ဝံ့ကြွားစွာပြောလိုက်သည်။
*** မကာရ ရာသီဖွား ညီမငယ့်စိတ်ထား…
By cherrythet 2774 days ago on ဗဟုသုတ from newworldnanda.ning.com
…ပြာသိုလကို အင်္ဂလိပ်ပြက္ခဒိန်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်နေ့အတွင်း အချိန်ကာလများကို ခေါ်ဝေါ်ပြီး ကောင်းကင်ရာသီရုပ်က “မကန်း” ရုပ်ပုံရှိတာမို့ မကာရ ရာသီလို့ အမည်တွင်တယ်။ စနေဂြိုလ်စိုးမိုးပြီး မြေဓါတ်ကြီးစိုးတဲ့အချိန် ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာ မွေးဖွားလာတဲ့ အပျိုစင် ညီမလေးတွေကို မကာရ ရာသီဖွားလို့ခေါ်ရမယ်။
By sandarmoe 2789 days ago on ဗဟုသုတ from newworldnanda.ning.com
မတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတ၀န်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် မာလုကျပုတ္တ မည်သော ရဟန်းတစ်ပါးသည် ဤသို့ အကြံဖြစ်သည်။ လောကသည် မြဲ၏ဟု၎င်း၊ မမြဲဟု၎င်း၊ လောကသည် အဆုံးရှိသည်ဟု၎င်း၊ အဆုံးမရှိဟု၎င်း၊ အသက်သည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အတူတကွ ရှိသည် ဟု ၄င်း၊ မရှိဟု၎င်း၊ သတ္တ၀ါတို့သည် သေသည့်အခြားမဲ့၌ ဘ၀တစ်ဖန်ပြန်၍ ဖြစ်သည်ဟု၎င်း၊ သတ္တ၀ါတို့ သည် သေသည် အခြားမဲ့၌ ဘ၀တစ်ဖန်ပြန်၍ မဖြစ်တော့ဟူ၍၄င်း၊ သတ္တ၀ါတို့သည် သေသည် အခြားမဲ့၌ ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်ဟူ၍၄င်း၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့အား မဟောကြားပေ။
ဆီးရီးယားသမ္မတကတော်ရဲ့  ကံကြမ္မာ
By suwatisoe 2793 days ago on ဗဟုသုတ from www.myworld-phyophyo.com
The Lady ရဲ့ ကြမ္မာ
ရေအောက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံပွဲ တစ်ခု
By htainlin 2795 days ago on ဗဟုသုတ from blog.techspace.com.mm
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို သတိပြုစေရန် ဖြစ်ပြီး Climate Vulnerable Forum ရဲ့  ပထမဆုံး ဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲ လည်း ဖြစ် ပါတယ်။
ရယ်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ် ရောဂါ စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်းဖုန်း မရှိတော့ တာမျိုး၊ ဟန်းဖုန်း ပါဝါကုန်သွားတာမျိုး၊ ဟန်းဖုန်း ဘေလ်ကုန် သွားတာ မျိုးကျရင် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုနဲ့ အခြား မအီမသာ ခံစားချက် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပြီး ယင်းစိတ်ရောဂါကို Nomophobia လို့ အမည်ပေး ထားပါ တယ်။
By kyawswaraung 2819 days ago on ဗဟုသုတ from www.mediafire.com
ပိဋကတ်(၃)ပုံမြန်မာပြန် စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် / download ဆွဲချင်သူများ -
ကျေးဇူးပြု၍ တဆင့် share ခြင်းဖြင့် သာသနာ ပြုကြပါ ~
By sandarmoe 2822 days ago on ဗဟုသုတ from https://www.facebook.com
Tavarua လို့အမည်ရတဲ့ ကျွန်းဖြစ်ပြီး နယူးဇီလန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း မိုင် ၁၀၀၀ ကျော်အကွာ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာအတွင်းက ဖီဂျီနိုင်ငံမှာ တည်ရှိ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖီဂျီနိုင်ငံ ပင်မ ကျွန်းနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ရေမိုင် တစ်နေရာမှာ သီးသန့်တည် ရှိနေပြီး အလိုလိုနေရင်းကို အသဲပုံ ပုံစံ ထွက်နေတဲ့ ကျွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းက အသဲပုံ လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် Heart Shaped Island
By sandarmoe 2822 days ago on ဗဟုသုတ from www.innewsmyanmar.com
ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတာကို တက်တူးလို့ ထင်ချင်စရာ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ယင်းဟာ တက်တူးမဟုတ်ပဲ မိုးကြိုးပစ်လို့ ရတဲ့ အမာရွတ် ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Lichtenberg figure လို့ခေါ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း မဟုတ်ပေ မယ့် မိုးကြိုးအပစ်ခံရရင် ရတတ်တဲ့ အမာရွတ်အများစုက ပုံမှာ မြင်တွေ့ ရတဲ့ အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တက်တူးထိုးထားသလိုပဲ အပွင့် ပွင့် တွေနဲ့ လှနေ ပါတယ်။ မိုးကြိုးအပစ်ခံရပြီး ကံကောင်းလို့ အသက် ရှင် သွားတဲ့ လူနာတွေ ဆီကနေ မှတ်တမ်း တင်ထားတဲ့ အမာရွတ် ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း ပင်လယ်ကျောက် (ပင်လယ်ဖန်) များ တည်ရှိနေတဲ့ ကမ်းခြေဟာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ အမေရိကန်မှာဆိုရင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှ နှစ်ခုရှိပြီး ဟာဝိုင်အီ ကျွန်းမှာ တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။
ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတာကတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Fort Bragg ကမ်းခြေ မြို့ အနီးက ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု နောက်ပိုင်း လည်ပတ် ခွင့် ပေးပေ မယ့် ပင်လယ်ကျောက်များ ကောက်ယူခွင့်တော့ လုံးဝ မပေးတော့ပါဘူး။ ပင်လယ်ဆားနဲ့ ရေနဲ့ ရောလို့ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာ တဲ့ ကျောက် များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီး ကျောက်များတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဖန်စီ လက်ဝတ်ရတနာ ဖန်တီးဖို့တော့ အဆင်ပြေတဲ့ ကျောက်များ ဖြစ်ပါ တယ်။
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ တည်ရှိပြီး သြစတေးလျနိုင်ငံပိုင်ကျွန်း တစ်ခု ဖြစ် ပါတယ်။ အကျယ်အားဖြင့် ၅၂ စတုရန်းမိုင်ပဲ ရှိတဲ့ ကျွန်းငယ်လေး ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁၅၀၀ ဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ဂဏန်း (ဂဏန်းနီ) အများဆုံး နေထိုင်ကျက်စားတဲ့ ကျွန်းဖြစ်ပြီး ကျွန်းပင့်ကူကြီးများ လည်း ပေါပါတယ်။